K: အတာ - အတက်
ဘာညာ သာရကာ တွေကြားက .. အတာ
ညာတာ ပါတေး မလေး တွေရဲ့.. အတာ
ညုတုတု အက တွေ ရဲ့ ... အတာ
ညံ့တံ့တံ့ ... ညောင်နာနာ..ရောတဲ့ မွှေတဲ့.. အတာ
ငေးတေး ငိုင်တိုင် မလုပ် နဲ့. ... အတာ
အငိုက် အလစ် မှာ.. နတ်စိမ်း ဖြစ်တတ်သတဲ့..
၀ုန်း ကနဲ.. ဒိုင်းကနဲ..
အခု..ပြောနေတာ..လူ လား..နတ် လား..
အတက် လား အကျလား...
အကြပ်ပြီး မှ.. အတက်လား
အတက် မှာ ကျပ် တဲ့..ကားတွေ အကြောင်း
အတက် မပါ တဲ့..ခြေထောက် တွေအကြောင်း
အတတ် မလိုတဲ့.. အလုပ် အကိုင်ေ တွ အကြောင်း
အသတ် မခံ ရတဲ့.. ဒုစရိုက် သားတွေ အကြောင်း
သက်သေ မခိုင်လုံ တဲ့..ပုဒ်မ တွေ အကြောင်း
အသက် မသေ ကျန်နေသူတွေ
အသော မတက် ရတက် မအေးရကြောင်း ကိုတော့..
သိကြားမင်း ကို သာ တိုင်ကာ ပြောယုံ..
သင်္ကြန် ဆိုတာ..နှစ်သစ် ကို ကြိုဖို့ အကြောင်း.. နှစ်ဟောင်း ကို ဆေးဖို့ အရေး
ဘေးမဲ့ လွှတ်တဲ့ ငါး တွေ က လည်း.. ရေစုန် ကို ဆန်တက်..
အတက် နေ့ မှာ..
သိကြာမင်းလည်း ဒီနှစ်ကံမကောင်းဘူး၊ သောကြာသား
တွေ တာစားနေလို့ `သ´နဲ့ စတဲ့ သိကြားတောင်
လူပြည်မှာ ကျည်ကာအင်္ကျီဝတ်ပြီး လည်နေရတယ်။
ဟူးးးးး မောပါဒယ် အမရယ်...။
မကေတို့ ဂွင်ဖမ်းတာ တော် ပ !
အတု ..အတောင် ... အတွေး ...အတိတ် .. ကနေ ရေး လာလိုက်တာ အခု အတက် ကျ တော့ အလစ်မပေး တော့ဘူး ( good idea ) :) :) ဒီ တခါ ကေ ဘာရေး မလဲ လို့ စောင့်ကြည့်နေတာ ...
မကေ တယောက် မြန်မာ့နှစ်သစ်မှာ ကံကောင်း ခြင်း ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ အမြန်ဆုံး ရောက်ရှိပြီး တစ် မနေပါစေနဲ့ လို့ ဆုတောင်း လိုက်ပါတယ် နော့ ....
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆိုးတာတွေ မေ့ပစ်ကြမယ် အစ်မရယ်
နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာရှိမယ့် အသစ် အသစ်တွေ ကို မျှော်လင့်မယ် ။
မကေ မင်္ဂလာနှစ်သစ် ပါ။
အတက် ပြီးရင် အဆင်း ဆိုတာ ရှိသေးတယ် ထင်တာဘဲ .. မေ့တေ့တေ့ ပါဘဲ ..းဝ)
ဒီကဗျာလေးက ရသလဲ ပေးသလို တွေးစရာလဲ ပေးတယ်။ အသတ်မခံရတဲ့ ဒုစရိုက်သားတွေလဲ ခွေးရေပုရပိုက်နဲ့ မဆန့်တော့တဲ့ အတာ များ ဖြစ်နေပလား မသိ။
ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ ကေ ရေ..
ကမ္ဘာ ပေါ် မှာ ရှိရှိ သမျှသော နှစ်ကူး ပေါင်းစုံ
တို့ထဲ မှာ အတာ နှစ်ကူး သင်္ကြန်ကတော့ 
အလတ်ဆတ် ဆုံး နဲ့အလန်းဆန်း ဆုံး ပါပဲ ။
ဒါ ပေ မဲ့လေ ......
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တကယ် ပဲ ပျော်နိူင်ခဲ့ ပါစေ ဗျာ ။
ဒါတွေရှိနေသ၍ ဒီလိုဘဲ ဖြစ်နေမယ်ထင်တယ်